Varairidzi Voramwa Mabasa Vachiti Vawedzerwe Mari Dzavanotambira
Ndira 28, 2008
Sangano rinomirira varairidzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti varairidzi vakawanda nhasi havana kuenda kuzvikoro zvichitevera kuramwa kwavo mabasa zvizere, uko kwakatanga nemusi weChina svondo rapfuura.
Asi PTUZ inoti varairidzi muzvikoro zvakawanda kuMatabeleland, vaenda kumabasa sezvo vanga vasati vatambira mashoko ekuramwa mabasa aya. PTUZ inoti inoda kuti murairidzi anotambira mari yepasi pasi, atambire mari inosvika $1, 7 billion mwedzi wega wega.
Nhengo dzerimwewe sangano rinomirira varairidzi reZimta, idzo dzisina kuda kudomwa nemazita, dzaudza Studio 7 kuti idzo dzicharamba dzichienda kubasa sezvo sangano radzo riri kutaurirana nehurumende pamusoro penyaya yemihoro.
Munyori mukuru wePTUZ, VaRaymond Majongwe, vaudza mutori wedu wenhau Ntungamili Nkomo kuti kuramwa mabasa uku kuchaenderera mberi uye varairidzi vari kutiwo kana vakasapihwa mari yavari kuda iyi, havasi kuzodzokera kumabasa.